အဘယ်အရာ USAHello စာသင်ခန်းများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်? | USAHello | USAHello
USAHello လူတွေအမေရိကတိုက်၏ United States မှာအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးမည့်အခမဲ့အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းကမ်းလှမ်း. ကျနော်တို့ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အခမဲ့အတန်းကိုပူဇော်အဘယ်ကြောင့်လေ့လာပါ. ကျွန်တော်နေသောအထဲက Find နှင့်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ USA တွင်အသစ်ရောက်ရှိလာသောကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပင်ဖြစ်သည်.
Naser Yahya (အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့) နှင့် Tej Mishra (ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့) အတွက် USAHello ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် 2018.
ကျွန်ုပ်တို့၏အတန်းအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့ကလူတိုင်းဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်. USAHello non-အမြတ်သောကွောငျ့သငျသညျပေးဆောင်ရန်မလိုပါ. တစ်ဦးက non-profit ကကူညီပေးသည်ကိုလူများအနေဖြင့်ငွေရှာခြင်းမရှိပါကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ USAHello အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်နိုင်အောင်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဂရုစိုက်သူတွေကိုပိုက်ဆံပေး. USAHello ကိုမဆိုအစိုးရမှချိတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူး.
သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးရန်မလိုပါ, သို့သော်သင်စာရင်းသွင်းအီးမေးလ်လိပ်စာသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသင့်အကောင့်အမည်ဖြစ်လာလိမ့်မည်. သင့်အကောင့်ထဲမှာ, သင်အပြည့်အသင်ခန်းစာများနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်. ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ရပ်တန့်ဖို့လိုပါလျှင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပြောပြနိုင်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အတန်းကိုသင် GED ယူကွိုတငျပွငျဆငျ® စမ်းသပ်မှုနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်စမ်းသပ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အတန်းကိုသင်နေတဲ့ GED မပေးပါဘူး® ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်. သင်သည်သင်၏ GED ရဖို့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကစမ်းသပ်စင်တာကိုသွားရမယ်® ဒီပလိုမာလက်မှတ်. နိုင်ငံသားများအတွက်, သငျသညျကိုအမေရိကန်အစိုးရသို့လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်.
အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်းယခု USAHello ဖြစ်ပါသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်နောက်ခံကနေသေချာအသစ်ရောက်ရှိလာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ကြိုဆိုခံစားရစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နာမညျပွောငျးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာသင်ခန်းထဲမှာ.
ဘယ် website မဆိုငျသညျကိုပြောပြတယ်ဆိုရင်သူတို့သင်တစ်ဦးGED®ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအားငါပေးမည်, ဒါဟာမမှန်ပါဘူး. ဒါဟာမကောင်းတဲ့က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကိုပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုမပေးပါဘူး.
အဆိုပါGED®စမ်းသပ်ခြင်း Service ကိုဘယ်လိုအကြောင်းအဘယ်သို့မိန့်ကိုဖတ်ပါ စမ်းသပ်မှုလိမ်လည်မှုကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်
သက်သေခံချက် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားအချို့တို့သည် USAHello စာသင်ခန်းအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောသည်ကို
"ငါသည်ပြီးသားအိမ်ကိုတိုင်းပြည်ကနေအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာခဲ့, ငါမူကားရေခြားမြေခြားမှငါ့လက်မှတ်ကိုလွှဲပြောင်းမပေးနိုင်. USAHello မှတဆင့်အဆိုပါစမ်းသပ်မှုပြင်ဆင်မှုအကြီးအလေ့အကျင့်ခဲ့. ကျွန်မကောလိပ်မှရလိမ့်မယ်။ "- မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes, ပါကစ္စတန်ကနေမျက်နှာသစ်
"ဒါဟာ Swahili ထဲတွင်လေ့လာဖို့ပစ္စည်းများတွေ့ရှိရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခဲယဉ်းသည်. အင်္ဂလိပ်နှင့်ဆွာဟီလီနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့လာခွငျးအားဖွငျ့, ငါပြည်သူလူထု၏ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။ "- ရှာလုံ, ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကနေဒုက္ခသည်
"ငါသည်ငါ့ GED များအတွက်လေ့လာကူညီရန် USAHello တူသောအရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်အလွန်ဝမ်းသာတယ်။ " - Saint Fathiah
"ငါသည်သင်တို့၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်-ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရနိုင်ဘူးဒါပေမယ့်ငါသည်သင်တို့၏ GED လေ့လာမှုများအောက်ပါငါနဲ့ကျွန်မအလွန်ပျော်ရွှင်သည်သင်ခန်းစာခံစားမိပါတယ်ဘဝမှာအခက်အခဲများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်တယ်။ " - New York မှာအလားအလာကောလိပ်ကျောင်းသား
"ငါသည်ငါ့ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ GED စာမေးပွဲကကူညီရန်အ USAHello GED ပြန်လည်သုံးသပ်ယူ. ငါသည်အဦးဆုံးသောကြိုးစားမှုပေါ်မှာရှိသမျှဘာသာရပ်များအဘို့အကြှနျုပျ၏ GED စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး. ငါနှလုံး Monitor နည်းပညာရှင်သင်တန်းအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်. ယခုငါကောလိပ်ကျောင်းသင်တန်းများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်သည်ဟုပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ "- နစ်ခ် Esquibel
“ငါ GED တာငါ® ပြင်ဆင်မှုအတန်းဒီတော့ကျွန်မရဲ့ပညာရေးပြီးအောင်နှင့်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။” - Sabitra, ဘူတန်ကနေဒုက္ခသည်
သင်တို့သည်ငါတို့၏အတန်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည် Do? ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့!
အဆိုပါGED®အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ, HiSet နှင့် TASC စမ်းသပ်နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းစင်တာကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လို
USAHello အကြောင်းပိုမို Read
GED®နှင့်နိုင်ငံသားအတန်းနှင့် FindHello အခြားအသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်တွေကိုရှာပါ